လေအေးပေးစက်၏ ဘေးနှစ်ဘက်မှ လေကို ကျယ်ပြန့်စွာ ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး နေရာအနှံ့ လျှင်မြန်စွာ အေးမြစေပါသည်။အခန်းအတွင်းရှိ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ချပေးခြင်း၊ လေထုကို သန့်စင်ပေးခြင်း၊ လေထုထဲရှိ ပိုးမွှားများနှင့် ဖုန်မှုန်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ အအေးနှုန်းမြန်ဆန်သောကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို သက်သာစေပါသည်။ TECO မှ လေအေးပေးစက်များကို အသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းသောလေထုကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရှုရှိုက်လိုက်ပါ။
270000 ~ 285000 Kyats
ဝယ်​ယူပြီး​နောက်​ပိုင်း စိတ်​မညစ်​ရ​လေ​အောင်​ #CHIGO Air Con ကိုစိတ်​ချယုံကြည်​စွာ ​ ရွှေးချယ်​ကြရ​အောင်​ ❄
အဲကွန်း တပ်ဆင်ခြင်း ပြု ပြင်ခြင်း ဆေးကြောခြင်း
"Double Crane Air Con; M & E Service" မှ
Wonderful Air Cooler အကြောင်း.......... India Company နှင့် Chin Company စပ် ထုတ်ကုန်သစ် Wonderful Air Cooler ရပါပြီ။ Wonderful Air Cooler ရဲ့အားသာချက်များ 1. ၈- ၁၀ နှစ်ထိ အသုံးပြုခံနိုင်ခြင်း 2. ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်း 3. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း 4. မီးအား အသုံးပြုမှု သက်သာခြင်း
သုံးစွဲရလွယ်ကူတဲ့ ဘက္ထရီအားသုံး ဘီးလေဖြည့်စက်လေးပါ။ အဝင်ဗို့အား 12 VDC လောက်ဆိုသုံးလို့ရပါတယ်။ ဝါယာကြိုးအရှည်းကလည်း ၁၈၀၀ မီလီမီတာ လောက်ရှည်တဲ့အတွက် လိုအပ်သလို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ LED မီးလုံး (၄) လုံးပါရှိတဲ့ အတွက် ညဘက်မီးမရှိတဲ့ နေရာတွေမှာသုံးလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘက္ထရီအားသုံး ဘီးလေဖြည့်စက်ရဲ့ အရွယ်အစားကလည်း သိပ်သည်ကျစ်လစ်မှုရှိတဲ့အတွက် ဘယ်နေရာသွားသွား အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားလို့ရပါတယ်။ လေဖြည့်စက်ရဲ့ အလေးချိန်ကလည်း 1.8 Kg ပဲလေးတဲ့အတွက် သုံးစွဲရ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။
•Cool Capacity : 9,000btu •Jet Cool • Automatic Voltage Switcher • Auto Cleaning • Optimized Airflow • Deep sleep mode • Energy Saving • Power Consumption -1140W
Super General ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်အဆောက်အဦးများ အတွက် အသုံးဝင်သည့် Air Conditioner လေအေးပေးစက် တစ်မျိုးဖြစ်သည့် SGST 905/1205/1805အမျိုး အစား ဖြစ်သည့် လေအေးပေးစက်ကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် တင်သွင်း ရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းလေအေး ပေးစက် သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတု နှင့် ကိုက်ညီ မှု့ ရှိခြင်း ၊ရိုး ရှင်းပြီး ခိုင်ခံ့သော ပုံစံ ရှိပါသည်။ ဒါ့အပြင် အခန်း လေထု အတွင်း ဖုန်မှုန့် များကို သန့် စင်ဖယ်ရှားပေးပြီး အခန်းအ တွင်း အအေးချိန်ကို ထိန်းထားနိုင် ခြင်း သန့် ရှင်း လတ်ဆက်သော လေကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း မီးအား ထိန်းညှိပေးခြင်းတို့ အပြင် လျှင်မြန်စွာ အအေးဓာတ် ထုတ်လွှင့် ပေးနိုင်သည့် အပြင် ပုံမှန် လေအေး စက်များထက် အသံငြိမ် ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းကောင်းမွန်သော အချက် များနှင့် ပြည့်စုံသော လေအေးပေးစက်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြု လိုပါက SGST 905/1205/1805 Super General ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
Super General ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လေအေးပေးစက် တစ်မျိုးဖြစ်သည့် Air Conditioner SGSTR 905/1205/1805 လေအေးပေးစက် ကို လူကြီးမင်းတို့ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချပေး လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းလေအေးပေးစက် သည် အပူ အအေး နှစ်မျိုး အသုံးပြု နိုင်ခြင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရာ သီဥတု နှင့် ကိုက်ညီ မှု့ ရှိသည့် အပြင် ရိုးရှင်း ခိုင်ခံ့သည့် လေအေးပေး စက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အ ခန်းတွင်း ဖုန်မှုန့် များကို သန့် စင်ဖယ်ရှားပေးပြီး အခန်းအတွင်း အအေးချိန်ကို လည်း ထိန်းထား နိုင် ပါသည်။ ၄င်းလေအေးပေးစက်သည် သန့် ရှင်းလတ်ဆတ်သော လေကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အပြင် မီး အားကို လည်းထိန်းညှိ ပေးပါသည်။ လျှင်မြန်စွာ အအေးဓာတ် ထုတ်လွှင့်ပေး နိုင်သည့် အပြင် ပုံ မှန် လေအေးပေးစက်ထက် အသံငြိမ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းလေအေးပေးစက် SGSTR 905/1205/1805 Air Conditioner ကိုဝယ်ယူ အသုံးပြု လိုပါက Super General ကုမ္ပဏီ ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။